रिजालपछि निर्वाचनमा पराजित मुख्यमन्त्री शाहीलाई राजीनामा दिन दबाब - Everest Dainik - News from Nepal
रिजालपछि निर्वाचनमा पराजित मुख्यमन्त्री शाहीलाई राजीनामा दिन दबाब
२०७८, ३ पुष शनिबार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजित भएपछि डा. मीनेन्द्र रिजालले रक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्रीमाथि पनि दबाब परेको छ । उनले पनि रिजालले जस्तै नैतिकता प्रदर्शन गर्छन् या गर्दैनन् ? भनेर प्रश्न उठेको हो ।
रिजालले राजनीतिक नैतिकता प्रदर्शन गरेको भन्दै उनको प्रशंसमा समेत भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाही आफूभन्दा कनिष्ठ वरियताबाट हारेपछि उनले राजीनामा दिनुपर्ने दबाब सिर्जना भएको हो । तर शाही भने राजीनामा दिने मूडमा छैन् ।
उनले शनिबार बिहानै एक सूचना जारी गर्दै कसम खाँदै आफूप्रतिको विश्वासलाई जाँतोमा पिल्सिन नदिने बताएका छन् । उनले भनेका छन्,‘ तपाईंहरूको म प्रतिको माया, स्नेह, साथ, सहयोग, समर्थन र शुभेच्छाको म सदैव ऋणी रहिरहनेछु र तपाईंहरूको म प्रतिको विश्वासलाई जाँतोमा पिल्सिन नदिने कसम खाँदै मेरा जीवनबूटीलाई धोका दिएर बीचैमा छोड्नु मेरो धर्म र नैतिकता होइन ।’